भालेको आक्रमणबाट एक प्रहरीको मृत्यु , कसरी यस्तो भयो ? भिडियोमा हेर्नुहोला (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
भालेको आक्रमणबाट एक प्रहरीको मृत्यु , कसरी यस्तो भयो ? भिडियोमा हेर्नुहोला (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki November 2, 2020
फिलिपिन्समा आयोजित गैरकानुनी ‘भाले जुधाइ’ खेल रोक्न खोज्दा एक प्रहरी अधिकारी भालेको आक्रमणबाट मारिएका छन् । भाले जुधाइ रोक्न खोजेका लेफ्टिनेन्ट क्रिस्टियन बोलोकलाई भिडन्तका लागि भालेको खुट्टामा बाँधिएको फलामको धारिलो वस्तुले लागेको हो ।
भालेलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनको खुट्टाको नशामा लागेको प्रहरीले बताएको छ । उनलाई तरुन्तै प्रान्तीय अस्पतालमा लगिए पनि उच्च रक्तश्राव भएका कारण मृत्यु भएको थियो ।फिलिपिन्समा ‘टुपाडा’ भनेर चिनिने भाले जुधाइ खेल लामो समयदेखि खेलाउँदै आएको छ । तल भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी हेर्नुहोला ।
११ बर्षमै यस्तो काम गरेर परिवार पाल्दै यी नानी, दिनको...
संगै सुतेकी श्रीमती रातारात ११ बजे फरार भएपछी |
श्रीमानले छोडेपछि होटेलमा यस्तो काम गर्दै युवती, बाध्यताले गर्दा गर्नपरो...